Ystalien Samaro, « mahafinaritra ahy ny mamorona tetikasa sy manampy ireo manodidina ahy ho tafita »
Publié avril 3, 2018 par Book News
Tovolahy be herim-po, mazoto lalandava ary tia mandraharaha i Ystalien. Eo amin’ny fiainany andavanandro dia sahy mijoro amin’ny maha izy azy izy, milona anatin’ny tontolon’ny fananganana tetikasa ary tia manampy ny manodidina azy izy.
Ystalien Samaro, mpisehatra mavitrika amin’ny fiarovana ny tontolo iainana
Ystalien Wang Kine Samaro. Fantatry ny maro amin’ny anarana hoe Ystalien. Tovolahy 23 taona, malagasy, monina ao Toamasina. Mpianatra taona fahadimy amin’ny lalam-piofanana Tontolo iainana ity tovolahy ity. Zavatra tiany tokoa, ary anisan’ny mpisehatra mavitrika amin’ny fiarovana ny tontolo iainana izy.
Mahakasika izany indrindra dia maro ireo fiofanana nataony momba ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny taona 2015 dia nivondrona niaraka tamina tanora maro izy nandritra ny COY (Conférence des jeunes sur la lutte contre le changement climatique) tany Antananarivo.
Ny taona 2016 dia nanaraka fiofanana tamin’ny aterineto izy, momba ny fiarovana ny tontolo iainana hatrany. Ny taona 2017 teo kosa izy dia nanaraka ny fiofanana « Young Leaders Fighting to Climate Change » na “Tanora mpitarika miady amin’ny fiovan’ny toetrandro” izay nomen’ny fikambanana alemana Friedrich Ebert Stiftung (FES). Ny taona 2017 ihany dia nandray anjara tamin’ny Fihaonana nasionalin’ny tanora ihany koa i Ystalien.
Mitarika tanora 14 amin’ny fanodinana taratasy tsy miasa intsony ho « bloc-notes » i Ystalien.
cc: Ystalien Samaro
Amin’ny maha mpisehatra mavitrika azy amin’ny fiarovana ny tontolo iainana dia maro ireo zavatra ataony eo amin’ny andavanandrom-piainany anehoana izany, na amin’ny alalan’ny fanentanana olona, na amin’ny alalan’ny tambazotra sosialy. Nanomboka ny volana desambra lasa teo ary dia nirotsaka an-tsehatra hanao tetikasa fanodinana taratasy tsy ampiasaina intsony ho lasa “bloc-notes” izy, ary nanangona tanora maro tany Toamasina hanatanterahana izany.
Tanora 14 ankehitriny no taritiny amin’izany ary efa nahazo fiaraha-miasa amin’ny Alliance Française Toamasina izy ireo.
Tanora mpitarika sy tia manangana tetikasa
Ny fitarihana olona dia efa talentan’i Ystalien. Ankoatra ireo fiofanana nataony voalaza teny ambony, dia nisy ihany koa ny fiofanana madinidinika mahakasika ny “leadership” na fitarihana olona narahiny tanatin’ireo fikambanana samihafa misy azy.
Mpisehatra mavitrika amin’ny fiarovana ny tontolo iainana i Ystalien.cc: Ystalien Samaro
Eo amin’izay resaka fikambanana izay hatrany, sekretera jeneralin’ny RCOI (Réseau Climat de l’Océan Indien” ny tovolahy. Mpikambana ao amin’ny Yali (Young African Leaders Initiative) Toamasina, nanangana ny orinasa UJA (Union des jeunes agriculteurs), mpiandraikitra ao amin’ny fikambanana tsy miankina Jade ary mitarika ny tetikasana fanodidina taratasy (etsy ambony).
Manangana tetikasa fananganana gazety ekolojika, Bio Book Madagascar, sy misehatra amina tetikasa fambolena an-tanan-dehibe (agriculute urbaine) koa izy amin’izao fotoana izao. Mbola be moa ny ho avy, araka ny nambarany.
Fandraharahana: fifanampiana sy fiaraha-miasa
« Mahafinaritra ahy ny mamorona tetikasa sy manampy ireo manodidina ahy ho tafita ».
Izay teny izay no nambaran’i Ystalien raha nanontaniana izy hoe inona no zavatra tena tiany eo amin’ny fiainana. Ho azy, ny fifanampiana sy ny fiaraha-miasa eo amin’ny samy tanora no anisan’ny antoka entina hampandroso an’i Madagasikara. Manoloana izany, nisafidy ny handraharaha sahady izy na dia mbola mpianatra aza.
“Nisafidy ny handraharaha aho satria io no hitako fa fanalahidin’ny fandrosoana ho an’i Madagasikara. Indrindra ny fandraharahana ara-tsosialy, satria izany no ahafahana indrindra manampy ny hafa”, hoy izy tsy am-pisalasalana.
Tanjon’i Ystalien ny fitondrana ny anjara birikiny amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara, fa eo ihany koa ny fampivondronana ny tanora hiara-hiasa.
“Mahantra ny firenentsika. Antsika no mieritreritra hoe inona no tokony atao, isika tanora no manoratra ny tantarantsika, satria isika mahavita zavatra ary manana ny “atouts”-antsika mihoatra amin’ireo firenena hafa. Maro isika no tanora eto ary izay dia efa tanjaka iray, maro koa ny harena ananantsika izay tokony trandrahina, na amin’ny lafiny inona na amin’ny lafiny inona. Isika malagasy ihany koa mahita vahaolana foana amin’ny rehetra satria efa zatra mitady vahaolana noho ny fahasarotan’ny fiainana”, hoy izy.
Araka ny nambarany hatrany, “isika tanora dia manana andraikitra amin’ny fampandrosoana ny firenena. Tsy tokony hiandry ny Fanjakana vao handroso, isika no fandrosoana, saingy mila isika tia tanindrazana”.